ပညာတတ္ေတြက လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ျပႆနာမျဖစ္ေအာင္ ဒီလိုရွင္းတယ္ by popolay.com
ပညာတတ်တွေက လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ပြဿနာမဖြစ်အောင် ဒီလိုရှင်းတယ်
30 Sep 2019 911 Views
ဒီနေရာမှာ “ပညာတတ်” ဆိုတာ အတန်းပညာတွေ၊ မာစတာဘွဲ့ကြီးတွေ ရထားတဲ့ သူတွေကို ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ပါဘူး။ ပါဠိဘာသာက လာတဲ့ “ပညာ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးက “အဆိုးအကောင်း အကျိုးအကြောင်းကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်သော အသိဉာဏ်”လို့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။
ဒီတော့ “ပညာတတ်” ဆိုတာ “အဆိုအကောင်း အကျိုးအကြောင်းကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်သော အသိဉာဏ်ရှိသူ”လို့ ဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။
လူမျိုးရေး ဘာသာရေးဆိုတာ အင်မတန် အကဲဆတ်ပါတယ်၊ ပညာမဲ့တွေများတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ လူမျိုးရေး ဘာသာရေးနဲ့ မှိုင်းတိုက်ပြီး ပြဿနာတွေဖြစ်အောင် ဆူပူအုံကြွအောင် လွယ်လွယ်လေး ဖန်တီးနိုင်ပေမယ့် ပညာတတ်တွေ နေထိုင်တဲ့ တိုင်းပြည်မှာတော့ မတော်တဆ အမုန်းတရားဆန်တဲ့ အကြောင်းအရာမျိုးကို လူမှုကွန်ယက်မှာ မရည်ရွယ်ပဲ တင်မိသွားရင်တောင် ပတ်ဝန်းကျင်က ဒါကို လက်မခံကြပါဘူး၊ ဝေဖန်ထောက်ပြကြပါတယ်။
တိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရသလို ဖြစ်သွားတဲ့ဘက်ကလည်း ပြန်လည်ရန်ပြုတုံ့ပြန်၊ အမှုဖွင့်အရေးယူမယ့်အစား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးနားလည်မှု ရသွားအောင် ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး နည်းလမ်းလေးက အတုယူစရာ အားကျစရာကောင်းပါတယ်။
စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က ဖြစ်ပျက်သွားခဲ့တဲ့ အတုယူစရာအဖြစ်အပျက်လေး တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ အလှအပနဲ့ ခရီးသွားရေးရာ ဆယ်လီ ဘလော့ခ်ကာ “Sheena Phua” ဆိုသူ အမျိုးသမီးက စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တုန်းက စင်ကာပူမှာ ယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့ ကားမောင်းပြိုင်ပွဲ F1 Grand Prix ကို သွားရောက်အားပေးခဲ့ပါတယ်။
ရုတ်တရက် သူမရဲ့ မြင်ကွင်းရှေ့မှာ ပန်ချာပီ(ဆစ်ခ်ဘာသာဝင်) အမျိုးသားနှစ်ယောက်ရဲ့ ခေါင်းပေါင်းတွေက ကွယ်နေတာကြောင့် ဒီအကြောင်းကို ဓါတ်ပုံနဲ့တကွ “သေစမ်း! ဘယ်ကဟာကြီးနှစ်ခုလဲမသိ မြင်ကွင်းလာကွယ်နေတယ်” လို့ ရေးတင်ခဲ့ပါတယ်။
ပညာမဲ့တွေရဲ့ တိုင်းပြည်မှာဆိုရင်တော့ ဆယ်လီဘက်ကလိုက်ပြီး ဘာသာခြားတွေကို ဝိုင်းဆဲလိုက်ကြမှာ မြင်ယောင်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဆီမှာကတော့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပါ။
ဒီလိုရေးလိုက်မိတဲ့ “Sheena Phua” ကို အွန်လိုင်းသုံးသူတွေက လူမျိုးရေးခွဲခြားသူအဖြစ် ဝိုင်းဝန်းပြောဆို ဝေဖန်ပါတော့တယ်။
အခြား ဆယ်လီတစ်ဦးကဆိုရင် “Sheena Phua” ရဲ့ ပို့စ်ကို သူမကိုစပွန်ဆာပေးနေတဲ့ စီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွေရဲ့ အကောင့်တွေ တက်ခ်ချိပ်ပြီး “Y’ all endorse this?” မင်းတို့အားလုံးရော ဒါကို ထောက်ခံနေသလား? လို့ မေးခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ထိ ပြန့်နှံ့သွားပါတယ်။ (လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အမုန်းတရားကို မီးမပွားစေပဲ ပတ်ဝန်းကျင်က ဒီလို ပြန်ထိန်းကြတာပါ)
သူမရဲ့ ရေးသားချက်ကို ဝေဖန်မှုတွေ များလာတဲ့အခါမှာတော့ “Sheena Phua” ကိုယ်တိုင် သူမရဲ့ မဆင်မခြင် ရေးသားမှုတွေကို ခွင့်လွှတ်ဖို့ အားလုံးကို ပြန်လည်တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။
သူမဟာ ဆစ်ခ်ဘာသာကိုရော အခြားဘာသာတွေကိုပါ စော်ကားလိုစိတ်နဲ့ မဟုတ်ပဲ မြင်ကွင်းကွယ်တဲ့ အကြောင်းကို ရိုးရိုးလေး ရေးတင်မိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ပြန်လည်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အတော်များများက သူမကို လုပ်ချင်ရာလုပ်ပြီးမှ ဆင်ခြေပေးတယ် “ဘုန်းကြီးခေါင်းခေါက်ပြီးမှ တောင်းပန်လို့မရဘူး” ဆိုပြီ တောင်းပန်တာကို လက်မခံကြပါဘူး။
ဒီသတင်းက တောမီးလို ပျံ့နှံ့ပြီးနောက်မှာတော့ ‘ဆစ်ခ်’ ဘာသာဝင်တွေလည်း သိသွားကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ စင်ကာပူနိုင်ငံ ဆစ်ခ်ဘာသာဝင်များအဖွဲ့အစည်းက “Sheena Phua” ကို သူတို့ရဲ့ ဘုရားကျောင်းကို အလည်လာပြီး ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေကို လာရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်လို့ ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီနောက် “Sheena Phua” ဟာ သူ့ရဲ့ အဖော်တစ်ဦးနဲ့အတူ ဆစ်ခ်ဘုရားကျောင်းကို သွားရောက်ခဲ့ပြီး သူတို့ရဲ့ ဓလေ့ထုံးစံတွေကို လေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေကို ဆစ်ခ်ဘာသာဝင်များအဖွဲ့အစည်းက သူတို့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်မှာ တင်ခဲ့ပြီး “Sheena Phua” အနေနဲ့ ယခင်က သူမအနေနဲ့ ‘ဆစ်ခ်’ တို့ရဲ့အကြောင်းကို သေချာမသိခဲ့ပေမယ် အခုတော့ သိသွားပြီဖြစ်လို့ နားလည်မှုတွေပိုရသွားကြောင်း၊ မရည်ရွယ်ပဲ သူမရေးသားလိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုဟာ ‘ဆစ်ခ်’ အဖွဲ့အစည်းကို ထိခိုက်သွားတယ်လို့ ယူဆပြီး ဝိုင်းဝန်းပဲ့ပြင်ပေးကြတဲ့အတွက် ‘ဆစ်ခ်’ တို့အနေနဲ့ ဝမ်းသာမိပါကြောင်း ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
“Sheena Phua” ဟာ ‘ဆစ်ခ်’ တို့ရဲ့ အထွဋ်မြတ်ထားရာ ဘုရားကျောင်းကို သွားခဲ့ပြီး သူမသိချင်တာတွေအားလုံးကိုလည်း ‘ဆစ်ခ်’ အဖွဲ့အစည်းက နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ ရှင်းပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ “Sheena Phua” က တစ်ဖန် ‘ဆစ်ခ်’ တို့အား အခုလိုမျိုး သူမလာရောက်လည်ပတ်ကြည့်လို့ ပိုပြီးသိလာသလို အခြားသူတွေကိုလည်း လည်ပတ်ဖို့ ခွင့်ပြုပေးပါလို့ ပြန်လည်အကြံပေးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဒီလို နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အဆင်ပြေသွားကြတော့မှ ပရိသတ်တွေကလည်း “Sheena Phua” အပေါ် ပြန်လည် အမြင်ကြည်လင်သွားပါတော့တယ်။
လူမျိုးအချင်းခြင်း၊ ဘာသာအချင်းခြင်း အပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိဖို့ လေးစားကြဖို့ ဆိုတဲ့နေရာမှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့နဲ့ အကောင်းမြင်အယူဝါဒရှိဖို့က အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။